Intouch Medicare ဆေးခန်းမှ ဆေးလက်မှတ်ရောဂါ 10 မျိုးသည် ဘာတွေစစ်ဆေးရမည်နည်း - Intouchmedicare
Intouch Medicare ဆေးခန်းမှ ဆေးလက်မှတ်ရောဂါ 10 မျိုးသည် ဘာတွေစစ်ဆေးရမည်နည်း
Last updated: 2021-10-12 | 118 ကြည့်ရှုခြင်း |
ဆေးထောက်ခံစာလက်မှတ် ၄င်းသည်အလုပ်လျောက်ရာတွင်လူတစ်ဉီးချင်းစီ၏အမှန်တစ်ကယ်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခဲ့ပြီးကြောင်းအားအတည်ပြုရန်အတွက်အသုံးပြုသောကျွမ်းကျင်သောဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးပညာရှင်တစ်ဉီးမှထုတ်ပေးသောစာရွက်စာတမ်း (သို့) ဆောနော 11 ဟုခေါ်သောရောဂါ 10 မျိုးပါ၀င်သောဆေးထောက်ခံစာလက်မှတ် (သို့) ရောဂါ9မျိုးပါ၀င်သောဆေးထောက်ခံစာလက်မှတ်ဖြစ်ပြီး အဖွဲ့အစည်းသတ်မှတ်ထားသောစည်းမျဉ်း (သို့) တစ်ဉီးချင်းစီမှအသုံးပြုယူဆောင်ပြနိုင်သော ဤဆောင်းပါး၌ Intouch Medicare ဆေးခန်း၏ရောဂါ 10 မျိုးပါ၀င်သောဆေးထောက်ခံစာလက်မှတ်အဖြေအား ဘာတွေ စစ်ရမည့်အချက်များနှင့် မည်သို့အဆင်သင့်ပြင်ဆင်လာရမည်ကို ဖော်ပြထားပါသည်။
Intouch Medicare ဆေးခန်း၏ရောဂါ 10 မျိုးပါ၀င်သောဆေးထောက်ခံစာလက်မှတ်သည် ရောဂါ9မျိုးပါ၀င်သောဆေးထောက်ခံစာလက်မှတ်နှင့်အခြားရောဂါများပါ၀င်သည့်စုစုပေါင်း ရောဂါ 10 မျိုးအပါအ၀င်မှ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
Intouch Medicare ဆေးခန်းမှဆေးလက်မှတ်ရယူရန်အတွက်လာရောက်စစ်ဆေးသော သူများသည် မိမိအသုံးပြုမည့်ရည်ရွယ်ချက်အားမည့်သည့်အကြောင်းအတွက်အသုံးပြုမည်ကိုဉီးစွာအကြောင်းကြားရပါမည်။ ဉပမာ မိမိလျောက်ထားမည့်အလုပ် မည်သည့်အလုပ်အမျိုးအစားဖြစ်ကြောင်းနှင့် အစားအသောက်အားကိုင်တွယ်မှု့အလုပ်နှင့်ပက်သက်၍အလုပ်လျောက်မည့်သူများ၊ပြည်ပသို့သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်မည့်သူများ၊အဖွဲ့အစည်းမှသတ်မှတ်ထားသောသတ်မှတ်ချက်နဲ့အညီအလုပ်မ၀င်မီဆေးစစ်အာမခံချက်လက်မှတ်(သို့) မည့်သည့်အကြောင်းအတွက်အသုံးပြုမည်တို့ဖြစ်ပါသည်။
Intouch Medicare မှဆေးထောက်ခံစာလက်မှတ်ရယူရန်အတွက် ကျန်းမာရေးစစ်ရန်အသင့်ပြင်ဆင်လုပ်ဆောင်လာရမည့်အဆင့်များ
ဆရာ၀န်ဆီမှဆေးလက်မှတ်စာရွက်စာတမ်းရယူလိုသူများသည် ၀န်ဆောင်မှု့အားမရယူခင် မှန်ကန်စွာအသင့်ပြင်ဆင်လာသင့်ပါသည်။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အသင့်ပြင်ဆင်လုပ်ဆောင်လာရမည့်အချက်သည် စစ်ဆေးမှု့အဖြေနှင့်တိကျမှု့အား ထိရောက်မှု့ရှိသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
1. အစားနှင့် ရေအားရှောင်ကြဉ်ရန်မလိုပါ
ဆရာ၀န်ဆီမှဆေးထောက်ခံစာလက်မှတ်ရယူရန်အတွက် Intouch Medicare မှကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှု့သည် အစားနှင့်ရေအားရှောင်ရန်မလိုပါ သိူ့ပေမဲ့ ရလာသောအဖြေ၌ကျေနပ်မှု့ရှိရစေရန်အတွက် မူးယစ်ခြင်း၊ အချိုဓာတ်နှင့်အဆီဓာတ်များ၊ကော်ဖီးအင်ဓာတ်ပါသောအချိုရည်များအား စစ်ဆေးမှု့မပြုလုပ်မီအနည်းဆုံး 24 နာရီ ရှောင်သင့်ပါသည်။
2. အိပ်ရေး၀အိပ်ခြင်းနှင့် လုံလောက်သောအနားယူမှု့ရှိခြင်း
ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှု့ဆေးစစ်ချက်ရယူရန်အရေးကြီးသောနောက်အချက်မှာ ပုံမှန်ရောဂါဖြစ်ခြင်းရှိမရှိအားတိကျစွာအကဲဖြတ်အဖြေရနိုင်ရန်အတွက် အနည်းဆုံး 6-8 နာရီအထိလုံလောက်အိပ်စက်စွာအနားယူခြင်းပဲဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ ရလာသောအဖြေပုံမှန်မဖြစ်ခဲ့ပါက လုံလောက်အနားမယူခြင်းကြောင့်နှင့်ဉပမာ နှလုံးခုန်နှုန်း၊သွေးတိုး၊(သို့)ကိုယ်ခန္ဓာအပူချိန်ပုံမှန်မဟုတ်ခြင်း အစရှိသည်တို့ကြောင့်မဟုတ်ပဲအမှန်တစ်ကယ်ရောဂါလက္ခဏာဖြစ်ကြောင်း တိကျစွာသိနိုင်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါသည်။
3. ဆေးစစ်မှု့အတွက် အဆင်ပြေစေမည့် စတ်စားဆင်ယင်မှု့
၀တ်စားဆင်ယင်မှု့အပိုင်းနှင့်ပက်သက်၍ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးရန်အတွက် အဆင်ပြေသော အ၀တ်အစားများ၀တ်သင့်ပါသည်။ သွေးပေါင်ချိန်ကိုတိုင်းတာရန် (သို့) သွေးဖောက်စစ်ရန်လွယ်ကူစေမည့် အထူးသဖြင့်မတင်းကျပ်သောအင်္ကျီကဲ့သို့သောအင်္ကျီလက်သည် လက်ဖျံထက်တွင်ရှိသင့်ပြီး အမျိုးသမီးများအနေနှင့်သံပါသောအတွင်းခံအင်္ကျီများ၀တ်ဆင်ခြင်း၊သတ္တုလက်ဝတ်ရတနာများဖြစ်သောဆွဲကြိုးမျာ၀တ်ဆင်ခြင်အားရှောင်ကြဉ်သင့်ပါသည်။ ၎င်းသည်ဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်းအားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
ဆောနော 11 ပုံစံအရ ဆရာ၀န်ဆီမှ ရောဂါ 10 မျိုးပါ၀င်သောဆေးထောက်ခံစာလက်မှတ်တောင်းခံသူသည် မစစ်ဆေးမီဆရာ၀န်အားအခံရောဂါ၊သောက်ဆေး (သို့) ဖြည့်စွက်ဆေးများသောက်နေသောသူ၊လတ်တလောတွင်ကိုယ်၀န်ရှိခြင်များရှိ (သို့) မရှိကို ကြို၍အသိပေးခြင်းနှင့်အကယ်၍ဆေးစစ်ခဲ့ဖူးသောအရင်အဖြေများရှိပါက ကုသရာတွင်အထောက်အကူဖြစ်စေရန်ယူဆောင်လာပေးသင့်ပါသည်။
5. ဤအပြုအမှု့များအား ရှောင်ကြဉ်ခဲ့ပါရန်
ဆေးထောက်ခံစာလက်မှတ်တောင်းခံသူသည်ကိုယ်ခန္ဓာခုခံအားပုံမှန်အခြေအနေတွင်ရှိနေစေရန် ဤအပြုအမှု့များအား ရှောင်ကြဉ်လာသင့်ပါသည်။ ဉပမာအားဖြင့် အမျိုးသမီးများသည် ဆီးစစ်ခြင်း၏အကျိုးအတွက် ရာသီမလာခင်နှင့်လာပြီး7ရက် အလိုကာလ၊မျက်လုံးနာနေသောအချိန်၊ကျယ်လောင်သောအသံကြားခြင်းအားအနည်းဆုံး 16 နာရီအားအစရှိသောအပြုအမှု့များအားရှောင်ကြဉ်သင့်ပါသည်။
Intouch Medicare တွင်ဆေးလက်မှတ်တောင်ခံခြင်း အလုပ်မ၀င်မီကုမ္ပဏီအားတင်ပြနိုင်သောစာရွက်စာတမ်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။အစားအသောက်များကိုင်တွယ်ရာတွင် (သို့) ၀န်ဆောင်မှု့အလုပ်လျောက်ရာတွင်ကူးစက်နိုင်သောရောဂါများမဖြစ်နိုင်ပါဟုအာမခံချက်ပေးနိုင်ခြင်း အဖွဲ့အစည်းမှသတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်းအလုပ်ခွင့်ယူရာတွင်အသုံးပြုနိုင်ပြီး ဤ၀န်ဆောင်မှု့အား စိတ်၀င်စား၍တောင်းလိုသူများနှင့် တောင်းဆိုသူ၏အလိုအတိုင်း ရှုပ်ထွေးမှု့မရှိပဲ အဆင့်မီကိရိယာများဖြင့် ဆရာ၀န်များနှင့် အတွေ့အကြုံရှိသောအဖွဲ့မှထုတ်ပေးသော Intouch Medicare ဆေးခန်းဌာနခွဲတိုင်းတွင် ၀န်ဆောင်မှု့အားရယူနိုင်ပါသည်။